Crystal Palace oo taako u dhigtay kooxda Arsenal oo marti u aheyd… +SAWIRRO – Gool FM
Crystal Palace oo taako u dhigtay kooxda Arsenal oo marti u aheyd… +SAWIRRO
(London) 11 Jan 2020. Crystal Palace ayaa taako u dhigtay kooxda Arsenal oo marti ugu aheyd garoonka Selhurst Park, kaddib markii ay ku kala baxeen bar-bardhac 1-1 ah ciyaar ka tirsaneyd kulamada 22-aad ee horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee Arsenal.
Daqiiqadii 12-aa Arsenal ayaa hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana 0-1 ka dhigay Pierre-Emerick Aubameyang, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Alexandre Lacazette.
Daqiiqadii 54-aad kooxda Crystal Palace ayaa heshay goolka bar-bardhaca waxaana 1-1 ka dhigay Jordan Ayew.
67 daqiiqo marka ay ciyaarta mareysay kabtanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa qaatay kaarka roosaha, kaddib markii uu mid ka mid ah xiddigaha Crystal Palace uu ku galay qaald aad u fool xul, Gunners ayaana wixii xilligaas ka dambeeyay waxay ku ciyaartay 10 ciyaartoy oo kaliya.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay bar-bardhac 1-1 ah oo ay isku dhaafi waayeen labada kooxood Arsenal iyo Crystal Palace.